OS X El Capitan ကိုသန့်ရှင်းစွာ install လုပ်နည်း | ငါက Mac ပါ
OS X El Capitan ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲ
အသုံးချ | | Mac OS X ကို, NOTICIAS, လဲ tutorial
ငါတို့ဒီမှာဂန္ထဝင်ကိုစတယ်။ OS X El Capitan ကို scratch မှဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှအမှိုက်သရိုက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများအပြီးစုဆောင်းမိသောအမှားအယွင်းငယ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ဤဖြစ်စဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးယခင် X X ဗားရှင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်ပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ Mac ရှေ့၌ဖြည်းညင်းစွာထိုင်ပြီးတိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခံစားရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပေးကြပါစို့ ခေါင်းဆောင်.
OS X El Capitan 10.11 ကို scratch မှတပ်ဆင်ခြင်း
အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့၊ အကယ်၍ သင်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပြီးကတည်းကကြာမြင့်စွာရှိနေပါက၊ အကယ်၍ သင်တစ်ခါမျှမလုပ်ဖူးပါက၊ အချိန်မကုန်သေးလျှင်၊ အသစ်ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအာကာသရရှိပါလိမ့်မယ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, သင်ကစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူလျော့ချခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်ရရှိပါလိမ့်မယ်, ဤသည် OS X အယ်လ် Capitan အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac ကို ၄၀% ပိုမြန်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊
သင်၏ Mac ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ OS X ကိုအယ်လ် Capitan 10.11 တစ်ချိန်တည်းမှာအနည်းဆုံး 8GB ရှိတဲ့ Pendrive တစ်ခုကိုအိမ်တွင်ကြည့်ရှုပါ၊ သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ DiskMaker X ကို.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Mac App Store မှ OS X installer ကိုလည်း download လုပ်ပါ။ သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပေါ် မူတည်၍ အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်ဆိုသည့်အချက်အချို့ရှိသည်ကိုသတိရပါ။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း Mac ကိုစစ်ဆေးပါ။ အရာအားလုံးကိုသူ့နေရာတွင်ထားပါ။ downloads ဖိုင်တွဲကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်မလိုအပ်သောအရာများကိုဖျက်ပစ်ပါ။ My Mac ကိုသန့်ရှင်းပါ.
ဘယ်အချိန်မှာ installer ကို OS X ကိုအယ်လ် Capitan 10.11 ဒေါင်းလုပ်ပြီးပါပြီကပိတ်လိုက်
အနည်းဆုံး 8GB ရှိတဲ့ USB ကို Mac ထဲထည့်ပါ။
ဖွင့်လှစ် မင်္ဂလာပါ နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးခလုတ်သုံးခုသို့မဟုတ်လေးချောင်းဖြင့်သင့် El El Capitan Bootable USB ကိုသင်အဆင်သင့်ရရှိမည်။
ယခု OS X installer ကိုသင်၏ Mac မှဖယ်ရှားပါ (၎င်းသည် "Applications" ဖိုင်တွဲတွင်) ။
Backup လုပ်ပါ Time Machine (သို့မဟုတ်သင်မည်သို့သောအားဖြင့်လုပ်လေ့ရှိသနည်း၊ ၎င်း၏အလွန်လွယ်ကူမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်ကျွန်ုပ်သည် Time Machine မှအမြဲတမ်းပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ )
မိတ္တူကူးပြီးလျှင်“ System Preferences” →“ Startup Disk” သို့သွားပါ။ သင်ဖန်တီးထားသော bootable USB ကိုရွေးချယ်ပါ။ “ Restart” ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ Mac သည်ထည့်သွင်းသူမှတိုက်ရိုက်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မည် OS X ကို ဗိုလ်ကြီး 10.11
ထိပ်ပိုင်းမီနူးတွင်၊ Utilities ကိုနှိပ်ပါ၊ Disk Utility ကိုနှိပ်ပါ။ → Mac ၏ပင်မ disk ကိုရွေးချယ်ပါ။ delete ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ Mac သည်အရာရာတိုင်းနှင့်သန့်ရှင်းနေပြီဖြစ်သည်။
Disk Utility မှထွက်ပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါ။ ဖန်သားပြင်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုသာလိုက်နာပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ၊ ဖန်သားပြင်များထဲမှတစ်ခုသည်သင့်အားအရံသိမ်းဆည်းမှုကို Time Machine မှလွှဲပြောင်းရန်သင့်အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ဒီရွေးစရာကိုရွေးပြီးစောင့်ပါ။
အဆင်သင့်! လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါသင်၏ Mac ကိုသန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အသစ်စက်စက်ဖြစ်လာလိမ့်မည် OS X ကိုအယ်လ် Capitan 10.11, သင်သည်အခမဲ့ဖျော်ဖြေပွဲများအနိုင်ရလိမ့်မည် (စစ်ဆေးကြည့်ပါ) ၎င်းသည်ယခင်မွမ်းမံမှုများမှ“ junk” ကိုဆွဲယူသွားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုအလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » OS X El Capitan ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲ
သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုသည်အကြံပြုထားသည့် option ဖြစ်သည်။ ယခုမေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရရှိခဲ့သောပုံမှန် application များကိုမည်သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ သူတို့သည် Time Machine copy မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်သလား။
သို့မဟုတ်အချိန်ယူသောအရာအားလုံးနှင့်ထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်း / ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်ပိုကောင်းပါသလား။
ဟိုင်းပါич အကယ်၍ သင်သည် ၁၀၀% သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုပါကသင်၏အရာသည် Mac App Store ရှိ "Purchased" tab ကိုသွားပြီးသင်ထပ်မံတပ်ဆင်လိုသောအရာအားလုံးတွင် "Install" ကိုနှိပ်ပါ။ အမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်အချိန်လုံးဝနီးပါးမရှိတော့ပါ။ ။
အကယ်၍ သင်သည် Time Machine backup တစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းရန်ရွေးချယ်ပါကသင်ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ပါ။
Backup မပါဘဲ El Capitan ကိုကျွန်တော်ပဲ install လုပ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အများဆုံးအကြံပြုသည်။
Autocad သို့မဟုတ် Photoshop ကဲ့သို့သောအက်ပ်မဟုတ်သောစတိုးပရိုဂရမ်များကော။ သူတို့ကိုသင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်လိုမည်လား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် DiskMaker X5 ဖြင့် bootable USB disk တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အဆင့်များကိုလိုက်နာခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းစနစ်ကအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုပြသနာမရှိဘဲဖန်တီးပေးသည်။ "startup disk" တွင် USB သို့မဟုတ်ပေါ်လာသည့် alt ကိုမတွေ့ရပါ။
ငါအက်ပဲလ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေနောက်လိုက်ပြီး command တွေလိုက်လုပ်တယ်။ installation disc ကိုပြwithoutနာမရှိဘဲဖန်တီးသော်လည်း၎င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး El Capitan အက်ပလီကေးရှင်းကိုငါးကြိမ်လောက် download လုပ်ပြီးပြီ။
ငါ USB installer ကို run ပြီး« Window »တွင်« installer Registration »ပေါ်လာလိမ့်မည်။
အောက်တိုဘာ 11 22:34:04 iMac-de-Luis Carlos InstallAssistant : Package Authoring သတိပေးချက် - installer script ကသတ်မှတ်ထားပေမယ့် package id com.apple.pkg.OSUpgrade version 10.11.0.1 ကိုအသုံးမပြုပါဘူး။ ၀.၁ ။
Luis Carlos အားပြန်ပြောပါ
Safari သည် OS X El Capitan တွင်စစ်ဆင်ရေးအသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်